Birzhin Andrey Aleksandrovich - usomabhizinisi abanamakhono. Nguye owasungula ka GK Glorax Group. Phakathi umsebenzi uye etholakala anolwazi amaphrojekthi ahlukahlukene. Nakuba lo somabhizinisi ukholelwa ukuthi impumelelo nethimba lakhe lonke ochwepheshe.
Birzhin Andrew, ogama biography waqala, efana abafana kakhulu Soviet, yazalwa ngo-12.04.1981, e-Ivanovo esifundeni, Shuya edolobheni, kodwa wakhulela futhi wafundiswa emzini Khotkovo, esifundeni eMoscow. Ubaba Andrew Alexander Pavlovich Birzhin wathunyelwa simila wendawo "Elektroizolit" unjiniyela imishini futhi sasuka ekubeni onguchwepheshe abasha kuMqondisi-Jikelele we PJSC "Elektroizolit". Akumangazi ukuthi indodana futhi nanifuna ukukufinyelela iziqongo ezinkulu wanquma ukwenza okwabo.
Ngemva kokuqeda isikole ngo-1998 wangena Birzhin Lomonosov eMoscow State University e-Faculty of Economics and Management. Wathweswa iziqu University ngo-2002, khona-ke ngokushesha wangena magistracy, esihlanganisa ukucwaningwa umsebenzi, kusukela ngaleso sikhathi usomabhizinisi izithakazelo eningi iye igxile ekuthuthukiseni okwabo.
Khula usomabhizinisi e Moscow (nakuba yendawo azalelwa kuyo iyona edolobheni Shuya), endaweni efanayo futhi waqala umsebenzi wakhe. Okokuqala Okunye esasikwenza imisebenzi amancane enzelwe amasimu amancane. Kusukela 2001 kuya 2005, u-Andrey Aleksandrovich wasebenza njengoba umqondisi-jikelele we OOO "Geostroydizayn". Khona-ke kuze 2009 bekatsatsa isikhundla Jikelele Umqondisi LLC "Zhilstroy."
Idolobha lasekhaya Shuya ayikwazanga ukunikeza melela kangaka umqansa umsebenzi isitebhisi. Enhloko-dolobha Birzhin ithole isipiliyoni kakhulu. Andrey iminyaka eyishumi ngcono nokwakhiwa futhi kulungiswe izakhiwo ihhovisi, izindawo zezimboni kanye izakhiwo zokuhlala. Akazange ukudlula ukunaka kwakhe ezemidlalo izakhiwo kanye nezinye izikhungo ezisemadolobheni.
Sonke leso sikhathi u-Andrey Aleksandrovich iyalalelisisa kunoma operation ngokuningiliziwe. Usomabhizinisi isiqiniseko sokuthi ibhizinisi alikwazi eyakhelwe izinqumo ezisheshayo futhi ukuqubuka. Endleleni eya umgomo kudinga ukunakekelwa kanye ukuhlolisisa. Kuyinto lezi zimiso kanye Birzhin eqondiswa.
Ngo-2009, u-Andrew Birzhin eyasungulwa Tekta Group, okuyinto isikhathi esifushane kakhulu, iminyaka emithathu nje ubudala, wajoyina uhlu Onjiniyela ngobukhulu esifundeni Moscow. Ngaphansi kobuholi Birzhina inkampani anda utshalomali portfolio ayo izikhathi eziyisithupha. Ngo-2010, u-Andrew Birzhin ozuza isitshalo "Elektroizolit", okuyinto iyoba yingxenye yeqembu izinkampani Glorax Group. Usomabhizinisi otshala imali ekuthuthukiseni inkampani futhi kakhulu kunomthelela waphela ngesikhathi isikhundla okuholela emakethe ezifuywayo international materials kagesi kanye nogesi. Ngo-2012, u-Andrew Birzhin engena lokuhambisa ukuthengwa "Mosavtodor nozakwethu" - nenkampani enkulu kunazo zonke esifundeni Moscow, okuyinto waziphatha ukwakhiwa komgwaqo, has lwemikhumbi yesimanje ukusebenza okuphezulu futhi ubuchwepheshe engabizi, kanye ukhiqiza asphalt inhlanganisela izinhlobo ezahlukene.
e "Isazi" edition ngo-2012 "Tektite" kwaba endaweni yesihlanu ku-uhlu Onjiniyela ezinkulu. Ngesikhathi esifanayo inkampani wathola umklomelo "Inkampani Yonyaka" ku RBC.
"Gloraks Iqembu" inkampani
Andrey Aleksandrovich unqume ukwandisa endaweni kwezinhloso zenzuzo. Businessman ithengiswe isithakazelo ayenaso "Tektite" ke wasungula iqembu elisha izinkampani. Birzhin Andrey Aleksandrovich ( "Gloraks Capital" ekuqaleni yangasese nokulingana Isikhwama) uye wagxila imizamo yayo phezu ukuthuthukiswa tinkhombandlela eziningana. Iqembu izinkampani wahlanganyela ukwakhiwa ngesikhathi, amandla, ukuphathwa efanayo ingqalasizinda kanye IT-ubuchwepheshe.
Okokuqala, "Gloraksom" wathenga iziteki izinkampani noma izinhlangano kulezi izimboni. Kungase kube nzima ukwenza ibhizinisi ekhona noma uqale-up. Khona-ke inkampani uthenge kwenza utshalomali umsindo. Ngaqala neketanga okucacile umqondo kwendalo umkhiqizo emakethe yayo kanye sipho yokugcina kumthengi. Ngenxa yalesi "Gloraks" isikimu usebenza kuze kube manje.
Birzhin Andrew akazange azikhohlwe zesihle nemisebenzi yezenhlalakahle. inkampani kasomabhizinisi Aqine "Gloraks Iqembu" njalo abathintekayo ngcono kwezindawo zasemadolobheni, ngokusiza kabusha amasonto, wahlanganyela ukwakhiwa nomphakathi. Andrey Aleksandrovich ngenkuthalo isekela ezemidlalo yezingane, kanye nezinye izinhlangano zenkululeko eminingi yomphakathi. Ukudala amaphrojekthi ngamanye futhi ukusekela akhona vele wadala "Gloraks Life" njengomugqa oseceleni emsebenzini GK.
Group of izinkampani "Gloraks azibandakanya" bacondze etindzaweni letehlukene, ezingalotshwanga ezithuthukisa phrojekthi. Noma kunjalo, kwenkululeko ingcebo namanje kulitjhejontangi. Birzhin Andrew wadala osizayo "Gloraks Development" ngo-2014 lunye wakhe - ukwakhiwa izakhiwo zokuhlala, izakhiwo zomphakathi kanye commercial ingcebo.
Manje iphothifoliyo Glorax Development amaphrojekthi kuka 2 million square metres. Lokhu indawo kuhlanganisa Petersburg, eMoscow isifunda Russia dolobha ngqo. Yezinjongo eziyinhloko inkampani bayindlala ku ukudalwa izimakethe zezindlu izinga, commercial ingcebo futhi zomphakathi. Ngo-2016 inkampani langena phezulu Onjiniyela eziyishumi Petersburg.
Kwezamabhizinisi Birzhin Andrew ukholelwa obuyigugu kakhulu abantu, ikakhulukazi ochwepheshe. Ukuze iqembu usomabhizinisi - hhayi nje enezisebenzi. Businessman uyakwazisa kwabanye lokusungula nobuchwepheshe, isifiso sokuvelela nezincazelo zamakhono. Birzhin ukholelwa ukuthi kuphela iqembu nalezi zimfanelo, ungakwazi athole impumelelo enkulu futhi imiphumela emihle kakhulu. Andrey Aleksandrovich uthanda isivinini, kanye nezimoto ezibizayo. Yena othanda yamahhashi emidlalweni eyingozi.
Kepha usomabhizinisi lowo uyena Ngokuvamile mikhankaso ahlukahlukene. Iqukethe ithimba nabagibeli, kodwa kuphela "Ferrari" futhi ngaphansi ifulege Swiss. Birzhin ukholelwa ukuthi hhayi kuphela Ukushushuluza kakhulu, kodwa futhi kudingeka ukulungiselela kahle izindaba umsebenzi. Lapho ukuphikelela kube ngukulunga, kumelwe ngempela ukubonisa, futhi lapho ingozi ikudukele, kubalulekile azithibe.
Kepha usomabhizinisi lowo akusho ukukhangisa ku umphakathi ngempilo yakhe yangasese, ngakho ulwazi mayelana nomkakhe nezingane zabo kancane. Unkosikazi ka-Andreya Birzhina - Sofia. Kuyaziwa ukuthi Sofiya Birzhina sase sinezinye izingane ezimbili futhi uzinika zonke ngesikhathi sakhe sokuphumula nengane. Sofia unaka ngokukhethekile amaphrojekthi emkhakheni yokuba nesibopho emphakathini, imfundo kanye esiza abantulayo.
Andrey Alexandrovich - ungusomabhizinisi ophumelelayo akagcini nje. Yena - owawina imiklomelo eminingi nezindondo. Ukuqokwa yabizwa ngokuthi "Ukuqamba Business" "Umuntu Yonyaka." Birzhin ukhishwa Order of Sergiya Radonezhskogo besigaba sesibili. Ngokwe isilinganiso we-Association of Abaphathi Russian kanye nencwadi "Kommersant" U-Andrey Alexandrovich wangena uhlu abaphathi engcono embonini yezokwakha.
Ukusungulwa - kuyini? Meaning nabameleli
Sifundo ezithakazelisayo: indlela ukudweba bamphathele ekwindla
Futhi uyazi ukuthi ubani eyasungulwa eMoscow?